सरकार जब सम्म सिन्डिकेट राज देखि माथि उक्लँदैन, सरकारले जब सम्म कुतत्वहरुको संरक्षण गर्नु छोड्दैन तब सम्म सुरक्षा सिक्किमको निम्ति अल्सर नै बनिरहने छ।” डा मिचुङ भुटिया
राज्यको समृद्धि अनि विकासको मेरुदण्ड व्यापार, वाणिज्य अनि आर्थिक विकासलाई मानिन्छ। राज्य सरकारको कर्तव्य बन्छ व्यापार, पर्यटन , कृषि आदिलाई प्रोत्साहन गर्नु अनुकूल वातावरण सृजना गर्नु पर्यो। यी क्षेत्रलाई फस्टाउन दिनु अनुकूल नीति अनि सिद्धान्त अपनाउनु पर्यो।
सिक्किममा व्यापार वाणिज्य, पर्यटन फस्टाउने अनुकूल वातावरणमा ह्रास आएको छ।
केही समय अघि हामीले सोसियल मिडियामा गान्तोकको एम जी मार्गमा पर्यटकलाई हिर्काउदै गरेको भिडियो देख्यौ। सिक्किमको एउटा मानीलिएको अनलाइन पोर्टलले (सिक्किम क्रोनिकल) हिजो यस्तो खबर दियो।
अनील गुप्ता (व्यापारी)ले दिएको जानकारी अनुसार सिक्किममा केही काम लिएर आएका व्यक्तिलाई (उनको आफन्त)हिजो राती एमजी मार्गको पीपलको रुखछेउ देखि हंग्रीज्याक जाने सिंढिमा असामाजिक तत्वहरुले आक्रमण गरी घाइते बनाइयो। घाइते हुने व्यक्तिबाट मोबाईल, पर्स खोस्ने कोशिश भएको अनि छुरीले प्रहार गरिएको बताइएको छ।
गान्तोकको मुटु मानिने एम जी मार्ग किन दिनदिनै असुरक्षित बन्दैछ? यो प्रश्न मेरो, एसडीएफ पार्टीको मात्र नभएर सिक्किमे जनता, पर्यटक अनि व्यापारीहरूको पनि प्रश्न हो।
सिक्किम सुरक्षित नै छैन। जहाँ व्यक्ति, पर्यटक अनि व्यापारीको सुरक्षा हुँदैन, जहाँ असामाजिक तत्वहरूको रगरगी बढ्छ त्यो ठाउँको अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्छ। असुरक्षित वातावरणमा राज्य अनि राज्यवासीको समृद्धि कदापि हुनु सक्दैन। असुरक्षित वातावरणमा कुतत्वहरु बढेर जान्छ।
सिक्किममा असामाजिक तत्वहरू किन बढेर जाँदैछ? पावरफुलको संरक्षण पाएन भने यस्ता कुतत्वहरु समाजमा फस्टाउन सक्दैन। राज्यको पावरफुलहरुकै संरक्षणमा आज सिक्किम असुरक्षित बन्दैछन्। यो असुरक्षाको दण्ड स्थानीय व्यापार वाणिज्य , पर्यटन , होटल व्यवसाय, चालकहरुले भोगी रहेका छन्। यिनीहरू राज्यको अर्थ तन्त्रको मूल खाबाहरु हुन।
प्रश्न उठ्छ राज्य सरकारले सिक्किमलाई किन सुरक्षा दिनु सकिरहेको छैन? के घटना हुँदा मात्र सरकार अनि सुरक्षा प्रशासन जाग्ने? सरकार जब सम्म सिन्डिकेट राज देखि माथि उक्लँदैन, सरकारले जब सम्म कुतत्वहरुको संरक्षण गर्नु छोड्दैन तब सम्म सुरक्षा सिक्किमको निम्ति अल्सर नै बनिरहने छ।
एम जी मार्ग अनि अन्य ठाउँका व्यापारीहरुले विपुल मतदान दिएर एस के एम सरकार बनाउनु सहयोग गरेको नबिर्सनु। व्यापारीलाई घरको योजना, ग्यास, अरु सहुलियत चाहिएको होइन। उनीहरूलाई चाहिएको एउटै कुरा व्यापार वाणिज्यको अनुकूल वातावरण। सुरक्षाको वातावरण भोट कै बदली मा भए पनि दिनु सक्नु हुन्छ होइन र?
एसडीएफको कार्यकाल सिक्किमको निम्ति स्वर्ण युग नै थियो। राज्यमा लगानीकर्ताहरु ओइरिएको पवनकालमा नै हो। रोजगारको प्रावधानको ढोका खोलिएको पवनकालमा नै हो। पर्यटनले क्वान्टम लिप लिएको समय पवनकाल हो। सिक्किमको क्वान्टम लिप देखेर उत्तर पूर्वी राज्यहरू दङ्ग परेका थिए। सिक्किमले क्वान्टम लिप लिनुको मुख्य कारण थियो व्यापार, पर्यटन, अर्थ तंत्र फस्टाउने अनुकूल वातावरणको सृजना। यहाँ शान्ति थियो। मानिस सुरक्षित थिए। हिंसा थिएन।
आजको सिक्किमलाई हेर्नुहोस। के उत्तर पूर्वी राज्यहरू कै हारा हारीमा सिक्किम पनि हिँडिरहेको त छैन? यो चिन्ताको विषय हो। हरेक सिक्किमेली जनताको निम्ति खतराको संकेत हो।
एस के एम लाई तन मन धनले सहयोग गर्नेहरूले पनि आत्मचिन्तन गरून्। के तपाईंहरूले चाहेको परिवर्तन यस्तै हो?
सरकार! पि एस गोले ज्यू !! एसकेएम !!! जाग्नु होस। धेरै लामो निदाउनु भो !
Previous: प्रेस क्लब अफ् सिक्किम र राज्य सरकारका प्रतिनिधिहरू माझ समन्वय बैठक
Next: राष्ट्रपतिको चुनाउमा एनडीएलाई समर्थन रहेको‌ एसडीएफका अध्यक्ष पवन चामलिङले गरे घोषणा